अभिनेत्री सौन्दर्याले ब्लाउज बिना साडी लगाउँदै भनिन् लकडाउनको सदुपयोग गरे ! – दैनिक नेपाल न्युज
अभिनेत्री सौन्दर्याले ब्लाउज बिना साडी लगाउँदै भनिन् लकडाउनको सदुपयोग गरे !
एजेन्सी – कोरोनाका कारण भारतमा यतिबेला लकडाउन गरिएको छ । लकडाउमा बलिउडका कयौ सेलिब्रेटिहरु घर भित्र नै बस्न बाध्य भएका छन र उनिहरुले लकडाउनको समयमा एक न एक भिडियो फेसबुकमा अपलोड गरेका हुन्छन् केहि दिन पहिला बलिउड अभिनेत्री करिना कैफले छोरा पती सैफलि खानसंगको एक भिडियो सामाजिक संजालमा शेयर गरेकी थिइन् ।
उक्त भिडियोले चौतर्फि चर्चा पाएको थियो । भारतमा कोरोनाबाट ज्यान जानेको संख्या ३३९ पुगेको छ । भने १ हजार २११ जना नयाँ थपिएका छन् । र यो समयमा कतिपय कलाकारले सहयोग गर्दै समेत आएका छन् । भने कोहि अभिनेत्रीले मिठा मिठा परिकारहरु बनाएर समय बिताएका छन् ।
त्यस्तै अर्कि अभिनेत्री सौन्दर्या शर्माले पनि सामाजिक संजालमा केहि तस्विर शेयर गरेकी छिन्। जुन तस्विरमा उनले ब्लाउज बिना साडी लगाएकी छिन् उक्त तस्विरले यतिबेला चर्चा पाएको छ । सुन्दरी नायिका सौन्दर्याले इन्स्ट्राग्राममा ब्लाउज बिना साडी लगाएको तस्बिर सेयर फ्यानले अनेक किसिमका कमेन्ट गरेका छन् । साडीमा उनी निकै सुन्दर देखिएकी छन् ।